दशैं सम्झना : नयाँ लुगा किनेर फर्किँदा नहरमा खसेको कहिल्यै बिर्सिँदैनन् प्रमोद खरेल
यो वर्ष दशैं, दशैं जस्तो छैन । त्यसैले खासै उत्साह छैन । स्वास्थ्य नै ठूलो कुरा हो । समय र परिस्थिति राम्रो भयो भने अर्को वर्ष धुमधाम दशैं मनाउने योजनामा छु ।
यो वर्ष दशैं नै मिस भइरहको छ । रमाइलो, आफ्ना आफन्तसँग भेटघाट । घुमघामदेखि सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू केही छैन । शायद जीवनमा कहिल्यै यो किसिमको दशैं मैले याद गरेको छैन । दशैं त आएको छ, तर केही छैन ।
जिन्दगीमा सबैभन्दा सम्झनलायक दशैंको सम्झना के हो ?
बच्चा हुँदाको धेरै कुरा याद आइरहेको छ । त्यो सानो उमेरमा पिङ, गाउँभर दिनभरि टीका लगाउन जाने, पैसा थाप्ने । मीठोमीठो खानेकुरा खाने । धेरै कुराको सम्झना छ नि !
आफन्तसँग भेटघाट र आशीर्वाद नै यसको पहिचान हो । शायद योभन्दा अरू ठुलो कुरा के नै हुन सक्ला र ! शायद त्यसैले भनिएको होला, दशैं नेपालीहरूको सबैभन्दा ठूलो चाड हो ।
दशैंमा सपिङ गर्ने बानी कत्तिको छ ? अहिले कसरी सपिङ गर्दै हुनुहुन्छ ? के–के किन्दै हुनुहुन्छ ? को–कसका लागि किन्दै हुनुहुन्छ ?
सपिङ त गर्ने पर्छ नि ! तर दशैं भन्दैमा अनियन्त्रित सपिङ गर्ने बानी चाहिँ छैन । यसपटक सपिङ छैन । कोरोनाले बजार जाने राम्रो अवस्था छैन । पुराना लुगा लगाएरै यसपटकको दशैंलाई बिदाइ गर्ने हो ।
दशैंको राम्रो नराम्रो पक्ष के–के हो ?
यो हाम्रो महत्त्वपूर्ण चाड हो । नराम्रो त्यस्तो केही छैन । कतिपयलाई काटमार नराम्रो लाग्न सक्छ । यस विषयमा मैले खासै केही बोल्दिनँ । राम्रो त दशैं एक पहिचान हो, संस्कृति हो ।
समयको माग हो । अचाक्ली व्यस्तता । जीवनशैलीमा आएको फेरबदल । जीवन जिउने शैली नै परिवर्तन भएपछि केही परिवर्तन त आउँछ नि !
दशैंमा मात्र हैन खाने कुरामा अन्य समयमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । खासमा दशैंको समयमा चिल्लो, पिरो र आवश्यकभन्दा धेरै खाने र खानपानको कम्बिनेसन मिलाउन नसक्दा बिरामी पर्ने गरिन्छ । स्वास्थ्यभन्दा ठूलो कुरा अरू केही छैन, एकदमै ख्याल गरौं ।
दशैंमा लुगा किनेर भद्रपुर बजारबाट फर्किदाँ झुक्किएर हिलोमा लडेको थिएँ । हात पखाल्न नहरमा निहुरिएको समयमा एक्कासि डुबेछु । धन्न ममीले कसरी कसरी किनारबाट तानेर बचाउनु भएछ । धन्नै केही भएन । त्यो घटना जिन्दगीभरि कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ ।
समय । दशैंको माहौल यस्तो अजीवको हुन्छ नि, जुन माहोलले दशैं आएको फील हुन्छ ।
तीन सन्तानको आमा बन्दै यी बलिउड अभिनेत्री
नेपग्याजम कमेडीलाई गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड